Isigqibo senziwe! Kuzo zonke iinketho zokulungiselela ukuzonwabisa kwam, ndakhetha ukwenziwa kwe-skating! Kwaye kutheni? Kukho i-tricot, i-sweater, i-hat, iiglavu-ezo zikhoyo. Skates?! Namhlanje siza kuthetha malunga nendlela yokukhetha iikhredithi zokudweba.
Kukho iindlela ezininzi zokuthenga umkhiqizo onjalo. Unako ngaphandle kokushiya indlu kwaye, ngaphandle kokukhangela phezulu esihlalweni, jonga zonke izibonelelo ze-intanethi. Kwaye makube le nyathelo lokuqala ekufezeni injongo yakho. Ngeyure ungabona ezininzi izibonelelo, misela izinto, umbala, intengo. Olu khetho luncedo kakhulu ngolu hlobo lokuba uya kuba "umthengi" onokukhokelwa ngabavelisi balezi zihlangu, eziphathekayo, izandi ezintsha zoshishino lwezemidlalo. Ukuba ebomini bakho oku akukuthengwa kokuqala kwezikhwama, kwaye ukufumana okunjalo sele kuqhelene nawe, ngoko unokwenza umyalelo ngokukhuselekileyo ulinde umnxeba emnyango.
Kuyakwazi ukuyeka kule nto, kodwa into endixelela ukuba le ndlela ayikufanelanga. Njengomfazi, ndivuma ngokuqinisekileyo nawe. Ngoko ke, siphendukela kwindlela yesibini. Emva kwakho konke, uyayithanda imilenze yakho? Zibuthakathaka, ziphawulwe, zidibene. Kwaye kubaluleke kakhulu - kuba bonke abafazi bahlukileyo kwaye abanakulinganiswa. Oku kuthetha ukuba xa ukhetha iikhredithi zokubhinqa, kufuneka uqale uzame. Ubukhulu besicelo sakho buza kuthatha umthengisi. Ndicinga ukuba ngenxa yokuthengwa kwexesha elilodwa, akufanele ukhathazeke ngezinga lobukhulu. Njengazo naziphi iinqanawa, zama izambatho ze-pantyhose okanye i-sock. Musa uvila uze uqhube ngokupheleleyo, qinisa isihlangu emlenzeni ngendlela oziva ukhululekile ngayo. Khumbula, akufanele kubekho indawo ekhululekile kwindawo yokuqala, kufuneka ifanelane nomlo weenyawo zakho. Le mqathango ibalulekile kuba umdlalo wokukhwela umdlalo ngumdlalo ohamba phambili, apho kukho iindidi ezininzi kunye neetoni. Ukuqina ngokunyanisekileyo unyawo lwakho luhlangene nesiqalo, umngcipheko omncinci wokulimala ukusuka ekhwele. Ukuba uthe wagqiba ekubeni ubukhulu, uqinisile ukukhwela, uziva "uyathuthuzela" - ungaba neentloni ukuma unyawo lwakho ngokupheleleyo kwaye wenze okungenani inyathelo elinye. Eli nyathelo liya kuthatha isigqibo ngokukhetha kwakho. Mamela imilenze yakho oyithandayo, ngokuqinisekileyo baya kukuxelela ukuba wenze ntoni ngokulandelayo. Ukuba kukulungele kwaye akukho nto ihamba ngayo ukuhamba kwakho-ke ukhetho luchanekile. Ukuba kukho ukungathandabuzeki - ungabi luvila ukuzama kwenye imodeli, kholwani mna, imilenze yakho iya kuba mbulela kuwe kamva.
Ngokuqhelekileyo, ukulungelelwa kwezikhwama kuya kuxhomekeka kwizinto ezivela kuzo. Iifemu-abenzi bezinto zinikela ngeendlela ezihlukeneyo kunye noqhelwano oluthile kwi "wallet" ezahlukeneyo. Ndiyaqakatheka ukukukhumbuza ukuba awufuni ububi emilenzeni yakho, ngoko uzama ukukholisa kulo. Kukho izicathulo ezenziwe ngeplastiki, i-polyurethane nezinye izinto zokwenziwa. Iinqwelo ezinjalo ziya kuba namandla ngokwaneleyo kwaye ziguquguquke. Kuloo mabhinqa abakhetha ubuhle nobabalo, oku kuya kuba yindlela efanelekileyo. Ngokukodwa abakhiqizi befesistiya banikela ngemifanekiso emihle kakhulu, kunye neentsimbi, imidwebo, zonke iintlobo zeefeksha zeqhwa kunye nezinye izinto zokuhlobisa. Emva koko, ukuba i-skate ice cream ngokomfanekiso, ngoko kutheni singabonakali ubuhle? Ezi ndlela zinokulungelelanisa abaqalayo, abangakakulungeli ukwenza izinto eziyinkimbinkimbi zendlela yokukhwela.
Uninzi lwabasetyhini luyaqhubeka lukhetha ulusu lwemvelo. Kulezi zicathulo, kunamathuba amaninzi okungabinqanda (i-rink ye-ice ihlala iqhwa!), Awuyikuvumela ukuba umswakama uphinde uthathe umlo weenyawo. Isikhumba sikhumba kunye nezinto eziphambili zihlukileyo kubantu. Ukuba unenkathalo malunga nexabiso lexabiso, ngokoqobo izikhwama ziza kuba zibiza kakhulu, kodwa ziya kuphazamiseka ngokukhawuleza (ziya kulahleka ifomu yazo ngokuchanekileyo).
Ngokuphathelele nayiphi na imfatho, kuquka nezambatho zezemidlalo, kuyimfuneko ukujonga iikhati. Iibhanqa zinoyiko lokutya, oku kufuneka kukhunjulwe ukuba ufuna ukukhwela ngempumelelo, ngaphandle kweengxaki. Akukho nto ekhethekileyo yokwenza ayikufanelekanga, kodwa emva nje kokusasaza kwezulu kusula. Kuya kuba luncedo ukomisa izicathulo emva kweseshoni sokusasa, kuba izicathulo zithatha umswakama kwi-ice kunye ne-sweat. Ungashiyi omile iikhati kwibhetri okanye kufuphi nomlilo ovulekileyo. Xa ixesha lokuqhwitha liphela, ngaphambi kokususa iikhatho zokugcinwa kwexesha elide, amaqabunga kufuneka atyiswe ngeoli injini-oku kuya kuba yokhuselo oluxhomekeke ekugqibeleni.
Kwaye enye into: ama-blades angaba mnqamla ngexesha, ngoko kufuneka ubeke ingqalelo kwiikhitile zakho kwaye ubanike ingcali yokukhawulela. Ukuba, emva kokuthenga iikhredithi, zivela ukuba azifanelekanga okanye ziphosakele, zingabuyiselwa kwisitoreji, zatshintshwe kumzekelo ofanayo okanye kwixabiso elininzi ngaphezulu kwimihla elishumi elinanye ukusuka ngomhla wokuthengwa (Isiqendu 25 soMthetho we-Federal "Ekukhuselweni kwamaLungelo omThengi" ").
Ndicinga ukuba akuyi kuba yinto engathandekiyo ukuba ukhumbule ukuba izikhwele kufuneka zithunyelwe kwivenkile yezemidlalo. Yaye ungakulibali ukuba kunye nezitifiketi kufuneka uzithenge izikhuselo zokukhusela. Ngoku uyazi indlela yokukhetha iikhatho zokukhwela.
Yiya kwindawo yokuzonwabisa!
Iingcamango ezingundoqo malunga nokusetyenziswa kotywala
Indlela yokunika isipho umntwana ngomnyaka omtsha
Indlela yokubopha isaphetha sephepha
Izinto eziyimfuneko zokuhamba nomntwana
I-pie yaseBrazil iyinkukhu
I-crickly cacti kunye nama-succulent juicy
U-Alika Smekhova, ubomi bobucala
Isitayela seMarha ngaphakathi
7 iimpawu zokuthandana
Imaski yeenwele kunye nekhilimu omuncu
Ingakanani ixesha kunye nendlela yokupheka ingqolowa ngokuchanekileyo: zokupheka zokupheka ama-cob kunye nezithombe kunye namavidiyo